Ukungavumelani kwe-iOS akuvumeli ukufikelela kuluntu lwabantu abadala | IPhone iindaba
Ingxabano ye-iOS ayikuvumeli ukufikelela kuluntu lwabantu abadala
UIgnacio Sala | 15/04/2021 12:00 | Iapps zokusebenza
Iqonga le-Discord elazalwa ngo-2015 njengeqonga labadlali, linamava okukhula kunyaka ophelileyo, ngenxa yobhubhane, njengoko kunjalo nezinye izicelo ezingaziwayo ukuza kuthi ga ngoku ezinje nge Zoom. Enkosi koku kukhula, iDiscord ikwayinto ye inethiwekhi yoluntu izele luluntu.
Ukukhula okunxulumene noko kuneziphumo, njengesiqhelo. Ngale ndlela, i-Discord iyayibona indlela iindawo ezininzi zabantu abadala ziyenziwa, eyaziwa eUnited States njenge-NSFW (Not Safe for Work), uluntu olungasafumanekiyo kubasebenzisi be-iOS ngokusebenzisa isicelo.
Olu thintelo aluchaphazeli iwebhusayithi yakho okanye usetyenziso lwe desktop. Kodwa, eyona nto inomdla kuzo zonke, yile ayichaphazeli abasebenzisi be-Android, ke kubonakala ngathi olu thintelo luxhaswe yiApple. Ayiloxesha lokuqala ukuba iApple inyanzelise inkampani ukuba isuse iintlobo ezithile zomxholo wabantu abadala, kwaye yonke into ibonakala ngathi ayizukugqibela.
Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba nangona i-Apple ayisosizathu, inento yokwenza nayo. Ngomhla wamashumi amabini anesibini ku-Matshi, Ingxabano Ukuhlaziywa kwenqanaba lobudala ukusuka kwi-12 ukuya kwi-17 ngesicelo sika-AppleNgenxa yokuba kulula kangakanani ukufikelela kwezi ntlobo zoluntu, inkampani esekwe eCupertino ifuna ukuba inqanaba lobudala liboniswe.
Discord ithi iqonga lakho lilungele abantwanaNgenxa yoko, ayisusi umxholo wabantu abadala kodwa inciphisa ukufikelela kwisicelo se-iOS. Inkampani ifuna ukuba abantwana abancinci bakwazi ukufikelela kwisicelo nokuba kusebenze ulawulo lwabazali, kuba, ngaphezulu kwako konke, sisicelo sokuncokola nabahlobo malunga nemidlalo yevidiyo.
Eli qonga lifuna abanini boluntu ukuba sebenzisa ileyibhile ye-NSFW kwiziteshi ezinomxholo wabantu abadala ukuba ujolisa kolu hlobo lomxholo okanye uninzi lwazo. Okwangoku, i-Discord ibanga ukuba inabasebenzisi abangaphezulu kwe-100 yezigidi ezisebenzayo zanyanga zonke, ezithe zabangela umdla kuMicrosoft, onqwenela ukuhlawula ukuya kuthi ga kwi-10.000 yezigidigidi zeedola.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Ingxabano ye-iOS ayikuvumeli ukufikelela kuluntu lwabantu abadala
I-2023 ye-iPhone iya kuba neelensi yefowuni ye-periscope ngokwe-Kuo